Ubaxii Deyrta: Qaybta 5aad - Boga Wise Man
September 25, 2019 qawdhan
Eman degdeg ayay lift-ga u kortay iyadoo isleh bilee lift-iga soo raac oo ku weydii waxaad ka eegaysay. Aqalkeedii ayay gashay, isla markiiba muraayada ayay hor istaagtay iyadoo isla yaaban oo leh maxaad samaynaysay.
Xoogaa ayay isla yaabtay, way yaxyaxday, aadna way u xishootay. Kolba waxay is weydiisaa tolow muxuu is odhan doonaa!
Kolba way qososhaa markay xasuusato, hadana khajishaa. Ugu dambeyn saaxibadeed Sucaad ayay wacday.
Eman: Waad yaabi hadaan kuu sheego waxa igu dhacay maanta
Sucaad: Maxaad samaysay?
Eman: Odaygii aan kuu sheegayay maalintii dhawayd ma xasuusataa een kulahaa Somali gym u socduu ahaa.
Sucaad: Haa, haygu odhan wuu igu keen-keenay!
Eman: Allah saasaa la qaatay wallaahi
Sucaad: La qaatay aa,
Eman: Galabta soo maan arag uun isagoo sabuurad wax ku qoraya oo daaqadu u furantahay anoo isleh muxuu qorayaa soo imuu soo eegin oo igumu qaban. Soo ana maan cararin markuu igu qabtay.
Sucaad aad bay u qososhay. Waxoogay markay qoslaysay ayay saaxibadeed ku tidhi.
Sucaad: Waa caadi maad salaantid. Maxaad uga baqaysaa soo oday aabaha le’eg ma aha waa adeerkaa oo kalee.
Eman: Dee oday saas ah ma aha, wuu weynyahay uun laakiin saas uma weyna.
Sucaad: Maxaad la carartay maad weydiisid waxa uu qorayo, wax weyn maaha. Hadaad aragto salaam uun oo dhaaf.
Eman: Muxuu is odhan doonaa ayaad u malaynaysaa?
Sucaad: Alla dee adaaba wax kale kugu jiraan malaa. Odaygan maxaad ka rabtaa? Wuxuu doono ha is yidhaahdo. Mise adaaba raba.
Eman: May wallaahi laakiin he is interesting. I don’t know.
Sucaad: I never thought that you liked old men naayaa.
In door ah ayay gabdhuhu kasii sheekaysteen dhacdadii Eman ay la kulantay galabkaa. Waxaanay markay is macasalaamaynayeen ku balameen in arrinkani sheeko dheer u baahan yahay oo berri jaamacada markay isku arkaan ay halkaa kasii wadi doonaan.
Saleebaan isagoo qoraalkiisii wata ayuu is weydiiyey waxa ay ta yari ka eegaysay! Markii uu ku qabtayna u oroday. Eegmadu waa caadi oo maxuma. Balse orodka maxaa keenay?
Markii uu arrinkii maskaxda ku rogrogay ayuu is arkay isagoon qoraalkii iyo shaqadii uu wadeyba fahmayn oo maqan. Wuxuu isku dayay inuu niyada ka saaro, hadana wuu is weydiiyaa marna wuu dhoola cadeeya kolba markuu xasuusto.
Wuxuu is yidhaa is dhaafiba aakhirkii waxa uu qaatay nasasho kooban.
Markaasuu waajahay xaalada cusub ee lasoo deristay. Wuxuu naftiisa kula yaabay riyaaqa ay naftiisu u riyaaqday gabadh yar oo ardayad ah eegmadeeda. Waxa uu is xasuusiyay in ay hawli u taalo oonu xiligan inan yaroo noloshu u cusub tahay jacayl la jili karayn. Su’aashu waxay noqotay sidee hadaba ayay suurto gal ku tahay in aanay isaga iyo gabadhaas yari halkaa isku dhaafin?
Saleebaan wuxuu is yidhi hadaad ka dhacdo waad usii macaananaysaa, hadaad adeer ahaan ula dhaqantana cagtay kugu badinaysaa! Ugu dambeyn waxa uu ku deystay in uu arko uun siday xaaladu noqoto oo markaa wuxuu go’aan ka gaadhayo yeelo imikana hawshiisa wato.
Jamaal wuxuu guriga ugu yimid Naasir oo laptop-kiisa ku maqan. Isla markiiba waxa uu u sheegay in gabadhuu sawirkeeda tusayay uu jaamacada ku arkay.
Naasir: Maxaad ii soo garaaci wayday?
Jamaal ayaa aad u qoslay isagoo leh miyaad sawiri lahayd hadana. Naasir ayay dacaayadaasi ka cadhaysiisay balse xasuustay inaan gabadha weji wacan ku kala tegin. Oo aanu intuu tago iskaga bilaabi Karin hadal.
Naasir: Waxba ha dacaayadayne niyow caawuunbaad ugu wanaagsantahay arrinkana ila gal billaa caleek.
Jamaal: Niyow horta aan ku weydiiyee adoo gabadh hore sidan ula dhacay ma arage , maxaad ku aragtay tan yar?
Naasir: Ma aragtay buuga uu qoray kayaree reer Hargeisa 2015-tii ee noocyada dumarka?
Jamaal: May! Buug maxaya?
Naasir: Waa buug kuyaroo reer Hargeysa ahi qoray oo imika kuma jiro internet-ka laakiin anaa copy ka haysta ayaan filayaa. Buugu wuxuu ka sheekaynayaa noocyada dumarka. Xataa imtixaan ayaa ku jira buuga oo markaad gasho jawaabaha aad xaga dambe ka eegayso kadibna aad ogaanayso nooca gabadha kugu haboon dabeecad ahaan.
Jamaal: War maahee?
Naasir: Haa, weliba si kaftan ahaana ayuu internet-ka usoo geliyey kaa yari laakiin qaarbaa ka bad-badiyoo buugiiba sida xisaabta u raacay. Markaasuu dib uga saaray meeshii uu soo geliyey, nasiib wanaag qaarbaa show dhawr copy ka samaystay. Kuwaas ayaan dirqi mid kaga helay hal nuqul.
Intii ay wada hadlayeen ayaabu soo saaray buugii Naasir, kadibna Jamaal u yeedhay oo laptop-ka ka tusay.
Jamaal ayaa cabaar akhriyey. Waaba buug si fiican loo qoray oo ay xataa sawiro ku yaalaan. Qaybaha dumarka, dabeecad ahaan iyo muuq ahaan.
Waxa Jamaal layaab ku noqotay isu ekaanshaha gabadhii jaamacada uu ku arkay iyo qaybta ay buuga kaga jirto, gaar ahaan cutubka lagu magacaabo “Mar la aragta”
Jamaal waxa uu ka codsaday in uu buuga email ahaan ugu soo diro Naasir. Jamaal isla markiiba waxa uu gudo galay inuu akhriyo buuga.
Habeenkaa Jamaal fikirkiisa wax badan ayaa iska bedelay…
deyr Eman Jacayl jamaal London naasir Saleebaan ubax Wakhti
Previous Post Ubaxii Deyrta: Qaybtii 4aad
Next Post Danta Somaliland Iyo Somalia Ka Dhexeysa
Roob iyo Sonkor - Qaybihii Koobaad iyo Labaad 16